फिचर | Everest Times UK | Page 7
काठमाडौँ । नेपाली उखान नै छ– १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ । तर, नेपालमै शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बित्दा पनि द्वन्दपीडित भने अन्यायमै रहनुपरेको छ । उनीहरुले शान्ति सम्झौतापछि न्याय पाउने आ...	Read more
हेर्नुहोस्, क्विन्स गुर्खा ईन्जिनियर रेजिमेन्टको वर्षगाँठका झलकहरु
पोखरा । क्विन्स गुर्खा ईन्जिनियर रेजिमेन्टको ऐतिहासिक ७० औं वर्षगाँठ तथा रेजिमेन्ट जमघट कार्यकम सम्पन्न भएको छ । पोखरास्थित ब्रिटीस क्याम्पमा शनिबार सो कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरिएको हो...	Read more
लन्डन । बेलायतमा बसोबासरत गुरुङहरुको साझा संस्था तमुधिं युकेको दसौं कार्यकालको लागि नन्दजंग गुरुङ निर्विरोध छानिएका छन् । २९ सदस्यीय कार्यसमितिको सन् २०१९—०२० को कार्यकालका लागि चुनिएका नन्द...	Read more
काठमाडौं । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, मानवअधिकार, भाषिक आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अगुवा पद्यरत्न तुलाधरको ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको निधनले नेपाली जनताले जुझारु योद्धा...	Read more
के कारण सङ्घ–प्रदेश विवाद ?
काठमाडौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएको व...	Read more
काँक्रो खान गएकी बालिका गोली खाएर फर्केपछि…..
शुरबहादुर सिंह जुम्ला । अदानचुली गाउँपालिका–४ बिगुठी हुम्लाकी १० वर्षीया बालिका रमिला बुमी गत असोज पहिलो साता आफ्नै कोदोबारीमा लगाएको काँक्रो खान गएकी थिइन् । दुर्भाग्यवशः काँक्रो खान गएकी उ...	Read more
कस्तो रह्यो सातौं संविधानको तीनवर्षे यात्रा ?
काठमाडौं । स्वयम् नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेखिनुपर्ने सात दशक लामो नेपाली जनताको चाहना पूरा भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले २०७२ सा...	Read more
कसरी बन्छ समृद्ध नेपाल ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली जनताले धेरैपटक सुनेको शब्द हो– समृद्धि । हरेक नेताको भाषणमा नछुट्ने शब्द पनि हो– समृद्धि । राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा धेरै रटानका साथ उठाइएको एजेण्डा हो–...	Read more
मुलुकी ऐनको हाउगुजी
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राणा श...	Read more
काठमाडौँ । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको पहिलो घटना हो । संसदीय अधिकारको प्रयोग नगरिएका इतिहासलाई हेर्दा नेपालको पह...	Read more